March 22, 2018 Spnews Comments Off on संघियताले नेताहरू करोडपतिबाट अर्बपति: मुलुक हरिकंगाल त हुँदैन ?
February 26, 2018 Spnews Comments Off on माओवादीको कमाण्डदेखि प्रहरीको कमाण्डसम्म पुग्ने को हुन ‘बादल’ ?
माओवादी जनयुद्धका सुरुवातकर्ताहरु को चम्किए को थन्किए ?
February 24, 2018 Spnews Comments Off on माओवादी जनयुद्धका सुरुवातकर्ताहरु को चम्किए को थन्किए ?
काठमाडौं । २०७४ फागुन १ गते माओवादी जनयुद्धको २२ औं बर्षगाँठ मनाउँदै माओवादी केन्द्रका सुप्रिमो प्रचण्डले पेरिसडाँडा मुख्यालयमा दश किलोको केक काटे । वि.सं. २०५२ सालताका जनयुद्ध सुरु गर्दाको सेकेण्डम्यान मोहन वैद्य किरण(जो प्रचण्डका गुरु […]
सोल्टी होटलमा कहां गयो एमालेको राष्ट्रवाद ? स्वराजको ‘टेक केयर’मा एमाले (भिडियो सहित)
February 2, 2018 Spnews Comments Off on सोल्टी होटलमा कहां गयो एमालेको राष्ट्रवाद ? स्वराजको ‘टेक केयर’मा एमाले (भिडियो सहित)
काठमाडौँ : भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलबीच भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ। राजधानीको सोल्टी होटलमा ओली र स्वराजबीच ‘एक्ला एक्लै भेटवाता’ भएपछि स्वराजले एमालेका अन्य नेतासँग सामूकिहक भेट गरिएका हुन्। स्वराजले […]
कस्को नेतृत्व भएको बेला नेपाली भूमी कति मिचियोे ? सीमाना मिचिदा चुँ सम्म नबोल्ने यी नेता हुन
January 28, 2018 Spnews Comments Off on कस्को नेतृत्व भएको बेला नेपाली भूमी कति मिचियोे ? सीमाना मिचिदा चुँ सम्म नबोल्ने यी नेता हुन
काठमाडौँ : नेपालीहरु नेपाल भारत बिचको सिमा विवादले वषौँदेखि पिडीत छन् । हरेक पटक भारतले नेपाललाई सिमानाको विषयमा थिचोमीचिो गर्दै आएको छ । नेपालीहरुले सिमाको विषयमा आवाज उठाउँदा भारतीय पक्षले नेपालीहरुमाथि बल समेत प्रयोग गरेको […]
January 15, 2018 Spnews Comments Off on “पृथ्वी नारायण शाहको मात्र होइन प्रचण्डको निधारमा थुक्ने दिन नआओस्”: आङकाजी
काठमाडाैँ । जनजाति नेता अाङकाजी सेर्पाले इतिहास नै गलत लेखिएकाे भन्दै पाैष २७ गतेकाे पृथ्वी जयन्तीलार्इ एकताकाे दिवस मनाउन नहुने तर्क गरेका छन् । पृथ्वीनारायणलार्इ थुकेकाे विषयलार्इ लिएर चाैतर्फी अालाेचना खेपिरहेका नेता सेर्पाले पृथ्वीनारायण शाहले […]
नाकाबन्दीमा केपी ओली सरकारको यस्तो थियो भारतसँग ‘कनेक्सन’
January 15, 2018 Spnews Comments Off on नाकाबन्दीमा केपी ओली सरकारको यस्तो थियो भारतसँग ‘कनेक्सन’
काठमाडौं । भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाउँदा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले वैकल्पिक उपायको रुपमा ८ वटा निजी कम्पनीलाई इन्धन खरिदका लागि अनुमति दियो । पेट्रोलियम पदार्थ आयातका लागि वैकल्पिक उपाय खोज्ने ओली सरकारको यस्तो […]
January 12, 2018 Spnews Comments Off on इतिहास जितेका पृथ्वीनारायण र हारेका हामीहरू…
दिल निशानि मगर मानव इतिहासलाई मान्दिन भन्नु ‘म’ बाँदर थिइन भन्नु हो। मानव इतिहासलाई मान्नु चाँहि म बाँदर थिएँ तर, परिवर्तनको नियमले मलाइ मान्छे बनायो भनेर स्वीकार गर्नु हो। पुर्खाले सुम्पेको सिङ्गो नेपाल अनि हालको नेपाल बिखण्डिकरणको महा-अभियानको तात्पर्य […]
मन्त्री ताक्दै एमालेका यी बद्नामहरु
January 8, 2018 Spnews Comments Off on मन्त्री ताक्दै एमालेका यी बद्नामहरु
काठमाडौं । एमालेको नेतृत्वमा २०४६ को परिवर्तनदेखि २०६२ ०६३ को गणतन्त्र प्राप्तीका लागि लडेकाहरुको बाहुल्यता छ । तर चुनावी राजनीतिमा जस्तासुकै प्रवृत्तिलाई पनि पार्टीमा ल्याउने र टिकट दिने गर्दा एमालेमा निरंकुश राजाको भक्तिगान गाउने र […]
देश सम्हाल्ने नेताका छोराछोरी कहाँ छन ? नेतापुत्रको विदेश मोह हेर्नुहोस् कसका सन्तान कहाँ ?
January 7, 2018 Spnews Comments Off on देश सम्हाल्ने नेताका छोराछोरी कहाँ छन ? नेतापुत्रको विदेश मोह हेर्नुहोस् कसका सन्तान कहाँ ?
कुनैपनि देशको विकास गर्नुको पछाडि कुशल राजनीतिज्ञको हात महत्वपूर्ण मानिन्छ । नेपालमा अहिले सम्मको अवस्था हेर्ने हो भने कुशल नेतृत्वनै जन्मिएको छैन जस्तो लाग्छ । दश वर्षअघि जनयुद्धमा रहेका माओवादी र संसदवादी दलहरु बाह्रबुँदे समझदारी […]